संस्थानले २० लिटरको जार बजारमा ल्याउने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
संस्थानले २० लिटरको जार बजारमा ल्याउने
बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१ मा प्रकाशित !
२६ फागुन, काठमाडौँ। खानेपानी संस्थानले २० लिटरको खानेपानीको जार दुई हप्ताभित्र बजारमा ल्याउने भएको छ ।काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा उत्पादन गरी प्रशोधन गरिएको पानीको जारको मूल्य रु ५२ कायम गरिएको संस्थानका कामु प्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए । संस्थानले पानी उत्पादन गरी वितरण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ ।
सबै सरकारी कार्यालयमा पानी वितरण गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले बताए । संस्थानले उत्पादन गरेको पानी गुणस्तरीय रहेको जनाइएको छ । सरकारी संस्थानले पहिलो पटक मिनरल वाटर बजारमा ल्याउन लागेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले २०६४ फागुन १ गतेदेखि उपत्यकाको खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड “काउखाली” लाई दिएको छ । संस्थानले भने हाल उपत्यका बाहिरका सहरमा मात्र पानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: चोथौ दिन पनि सप्तरीमा बन्द कायमै
NEXT POST Next post: आज विश्व मिर्गौला दिवस मनाइँदै
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, फाल्गुन २६, २०७३ ०७:०१